Izinqolobane ze-FAQ | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
Kuyini ukushisa kokungenisa okuphatha inqubo yaphezulu? Ukushisa kwe-induction kuyinqubo yokwelapha ukushisa evumela ukushisa okubhekiswe kakhulu kwezinsimbi ngokungeniswa kwe-electromagnetic. Le nqubo incike emisakazweni kagesi ebangelwe ngaphakathi kwento ukukhiqiza ukushisa futhi iyindlela ekhethwayo esetshenziselwa ukubopha, ukuqina noma ukuthambisa izinsimbi noma ezinye izinto zokuhambisa. Okwesimanje… Funda kabanzi
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa, Ubuchwepheshe Amathegi ukwelashwa ukushisa, ukushisa ukwelashwa kokushisa, insizakalo yokwelapha ukushisa, ukwelashwa kokushisa, ukwelashwa kokushisa, Ukwelashwa kokushisa kwe-HF, ukwelashwa kokushisa okuvama kakhulu, ukwelashwa kokushisa okuvama kakhulu, ukukhipha ukushisa kokufakelwa, inqubo yokwelapha ukushisa kokungeniswa, ukwelashwa kokushisa okuphezulu, ukwelashwa kokushisa ngaphezulu
Kuyini ukuhlanganiswa kwe-induction?
Ukubopha kwe-induction kusebenzisa ukufudumeza kokungeniswa ukwelapha okunamathisela okuhlanganisa. Ukungeniswa kuyindlela eyinhloko yokwelapha izinto zokunamathisela nama-sealants wezinto zemoto ezinjengezicabha, ama-hood, ama-fenders, izibuko ezibheka emuva kanye nozibuthe. Ukwenziwa futhi kuphulukisa okunamathiselwe kumalunga we-fiber-to-carbon fiber ahlanganisiwe. Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zokubopha izimoto: spotbonding,
eshisa izingxenye ezincane zezinto okufanele zihlanganiswe; ukubopha okugcwele, okushisa amalunga aphelele.
Izinhlelo ze-DAWEI Induction spot bonding ziqinisekisa okokufaka okuqondile kwamandla kuphaneli ngalinye. Izindawo ezincane ezithinteke ekushiseni zinciphisa ukunwetshwa okuphelele kwephaneli. Ukubambelela akudingeki lapho kuhlanganiswa izinsimbi zensimbi, okunciphisa izingcindezi nokuphazamiseka. Iphaneli ngalinye lihlolwe nge-elektroniki ukuqinisekisa ukuthi ukuphambuka kokufakwa kwamandla kungaphakathi kokubekezelelana. Ngokubopha indandatho egcwele, usayizi owodwa-
yonke ikhoyili inciphisa isidingo samakhoyili okuphumula.
Lokungeniswa kuyindlela ekhethwayo yokubopha embonini yezimoto. Isetshenziselwa kabanzi ukubopha insimbi nensimbi yensimbi ye-aluminium, kungeniswa kuya ngokuya kuqashwa ukubopha izinto ezintsha ezingasindi neze-carbon fiber. Ukwenziwa kusetshenziselwa ukubopha imicu egobile, izicathulo zebhuleki kanye nozibuthe embonini ye-electrotechnical.
Ibuye isetshenziselwe ukuqondisa, ujantshi, amashalofu namapaneli emkhakheni wezimpahla zabamhlophe.
I-DAWEI Induction inguchwepheshe ophulukisa ngokukhishwa kokungeniswa. Eqinisweni, sakha ukwelashwa kwendawo yokungeniswa.
Okokusebenza esikulethela amabanga avela ezintweni zohlelo ngazinye ezifana nemithombo yamandla namakhoyili, ukuqedela nokusekela ngokuphelele izixazululo zokhiye wokuphenduka.
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa Amathegi ukubopha, Ukufudumala kokubanjana kwamavunguvutha aphezulu, ukuhlanganiswa kokubambisana, ukushisa okuhlanganisiwe, inqubo yokubambisana, Inqubo yokubopha i-RF
Kuyini ukufutheka kokungena?
Ukushisa kwe-induction kuyindlela yokushisa elungiselela izakhiwo zemishini njengokuqina nokuqina
emisebenzini esebenzile kakade.
Inzuzo enkulu yokungeniswa ngaphezu kwesithando somlilo ijubane. Ukungeniswa kungabamba umsebenzi wokusebenza ngemizuzu, kwesinye isikhathi noma imizuzwana. Izithando zomlilo zivame ukuthatha amahora. Futhi njengoba ukufakwa kwe-induction kuphelele ekuhlanganisweni kwe-inline, kunciphisa inani lezinto ezisetshenziswayo. Ukushisa kwe-induction kusiza ukulawulwa kwekhwalithi kokusebenza ngakunye. Iziteshi zomoya wokungenisa ezihlanganisiwe futhi zigcina isikhala sendawo ebalulekile.
I-induction tempering isetshenziswa kabanzi embonini yezimoto ukufuthelisa izinto eziqiniswe ngaphezulu komhlaba njengamashafts, imigoqo namalunga. Le nqubo iyasetshenziswa nasembonini yamapayipi namapayipi ukufuthelana ngezinto zokusebenza ezinzima. I-induction tempering kwesinye isikhathi yenziwa esiteshini sokuqina, kwesinye isikhathi esiteshini esisodwa noma eziningana ezihlukene zomoya.
Izinhlelo eziphelele ze-HardLine zilungele izinhlelo zokusebenza eziningi zokushisa. Inzuzo enkulu yalezi zinhlelo ukuthi ukuqina nokushisa kwenziwa ngomshini owodwa. Lokhu kuletha ukonga isikhathi esibalulekile nezindleko ezinyaweni ezincane uma kuqhathaniswa nobunye ubuchwepheshe. Ngezibani, ngokwesibonelo, isithando somlilo esisodwa siqala siqine okokusebenza, sibe nesithando esehlukile
bese isetshenziselwa ukufutheka. Izimo eziqinile ze-DAWEI Induction Heating Systems nazo zisetshenziselwa ukufuthelana kwezicelo.
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa Amathegi ukuvama kwezinga eliphezulu, ukukhishwa kwe-induction, ukufakwa kwe-induction surface, Ukwelapha okunomsoco we-RF, ukuthukuthela, ukushisa ukwelashwa okushisa
I-Induction Brazing & Soldering Principle
Induction Brazing & Soldering Principle Brazing kanye ne-soldering yizinqubo zokujoyina izinto ezifanayo noma ezingafaniyo usebenzisa okokugcwalisa okuhambisanayo. Izinsimbi zokugcwalisa zifaka phakathi ukuhola, ithini, ithusi, isiliva, i-nickel kanye nama-alloys awo. Ingxubevange kuphela encibilikayo futhi iqine phakathi nalezi zinqubo ukujoyina izinto zokwenziwa zocezu lomsebenzi. Insimbi yokugcwalisa idonselwa ku… Funda kabanzi
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa Amathegi okuyisisekelo sokushisa, izindleko zokuqothula, isingeniso sokubamba inkolelo, izimiso zokungeniswa kwe-induction